यी हुन निर्मलाको हत्या गरेको आशंकामा काठमाडौंबाट पक्राउ परेका रावल, के भन्छ प्रहरी ? — sancharkendra.com
यी हुन निर्मलाको हत्या गरेको आशंकामा काठमाडौंबाट पक्राउ परेका रावल, के भन्छ प्रहरी ?
घटनालगत्तै उनीहरू महेन्द्रनगरमा बस्न छाडे: घटनालगत्तै उनीहरू महेन्द्रनगरमा बस्न छाडेका थिए । प्राय उनीहरू भारत बस्थे चारमध्ये केही विगतमा पनि अपराधिक गतिविधिमा संलग्न भएको समेत प्रहरी स्रोत बताउँछ ।
आइजिपी आफैं सोधपुछमा: निर्मला प्रकरणले प्रहरी नेतृत्वमाथि कति धेरै दबाब बढाएको छ भने प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनाल आफैंले सोधपुछमा खटिएका छन् । काठमाडौंमा पक्राउ परेका युवकमाथि सोधपुछ गर्न महानिरीक्षक खनाल आफैं सिआईबीमा पुगेको स्रोत बताउँछ ।
(नवराज मैनालीले नयाँपत्रिका दैनिकमा लेख्नुभएको समाचार संचारकेन्द्रका लागि साभार गरिएको)